ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ လူ့သဘာဝအကြောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြလာခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး – Cele Snap
ဖွူဖွူထှေးကတော့ ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါတှငျ Follower ၈သနျးကြျောရှိသညျ့ Social Influencer တဦးဖွဈပွီး စဈအာဏာရှငျ ဆနျ့ကငျြရေးတှငျ ပွညျသူနှငျ့တသားတညျး ရပျတညျမှုမရှိသလို ဆန်ဒပွပှဲမြားတှငျလညျး ပါဝငျခွငျးမရှိသညျ့အတှကျ ရပျ တညျမှု မှနျကနျသူ မဟုတျကွောငျး သတျမှတျခံရကာ လူမှုရေး ဖယျကွဉျမှုမြား(Social Punishment) ပွုလုပျခွငျး ခံထားရ သူ ဖွဈသညျ။
စဈအာဏာရှငျကို ဆနျ့ကငျြတျောလှနျနသေော ပွညျသူမြားနှငျ့အတူ မရပျတညျသညျ့ Facebook ဆယျလီ ဖွူဖွူထှေးအား ကုမ်ပဏီမြားအနဖွေငျ့ သပိတျမှောကျ (Boycott) ရနျ တိုကျတှနျးမှုမြား ကယျြလောငျစှာ ထှကျပျေါလာပွီးနောကျ စဈတပျ ထုတျကုနျမြားအပါအဝငျ လုပျငနျးပေါငျး ၂၀ ကြျောက လကျတှဲမှုရပျဆိုငျးကွောငျး ထုတျပွနျခဲ့ကွပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ သူမက ကငျးမရှာသို့အလှူတှေ ပွုလုပျခဲ့ပွီးနောကျ ဝဖေနျသံမြား ပိုမိုမြားပွားလာခဲ့ပါတယျ။
ရကျအတျောကွာ အှနျလိုငျးကနေ ပြောကျနခေဲ့ပွီးနောကျမှာတော့ ဒီနလေ့ေးမှာတော့ သူမ က ဘုရားတရားစာတှေ ရှယျရငျး ဖဘေု့တျပျေါကို ပွနျလညျရောကျလာခဲ့ပွနျပါပွီ…
သူမ ရဲ့ဖဘေု့တျ Myday မှာ လူတှရေဲ့ဝဖေနျမှုတှနေဲ့ပကျသကျပွီးတော့လညျး မှနျတာကိုလုပျပွီး ပှငျ့လငျးသူထကျ မဟုတျမမှနျတာလုပျပွီး ဟနျဆောငျကောငျးသူက ပိုပွီးကွောကျစရာကောငျးတယျ. .. ကမ်ဘာပျေါမှာ မတ်ေတာတရားနဲ့ မတနျတဲ့သူဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သူတဈပါးက ပို့ပေးလှတျတဲ့ မတ်ေတာတရားကို မခံယူတတျတဲ့ သူပဲရှိတာပါ ဆိုတဲ့ တရားစာလေးတှကေို တငျထားခဲ့တာ ဖွဈ ပါတယျ။
ဖွူဖွူထှေးရဲ့ တဈလှမျးခငျြး ပွနျလှမျးလာနတေဲ့ ပရိသတျတှကေရော သူမကို လကျခံအုံးမလားဆိုတာ ပရိသတျကွီးလညျး သူမကို ထငျမွငျခကျြလေးတှကေိုလညျး ရေးပေးသှားကွပါအုံးနျော…
ဖြူဖြူထွေးကတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် Follower ၈သန်းကျော်ရှိသည့် Social Influencer တဦးဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးတွင် ပြည်သူနှင့်တသားတည်း ရပ်တည်မှုမရှိသလို ဆန္ဒပြပွဲများတွင်လည်း ပါဝင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ရပ် တည်မှု မှန်ကန်သူ မဟုတ်ကြောင်း သတ်မှတ်ခံရကာ လူမှုရေး ဖယ်ကြဉ်မှုများ(Social Punishment) ပြုလုပ်ခြင်း ခံထားရ သူ ဖြစ်သည်။
စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေသော ပြည်သူများနှင့်အတူ မရပ်တည်သည့် Facebook ဆယ်လီ ဖြူဖြူထွေးအား ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် သပိတ်မှောက် (Boycott) ရန် တိုက်တွန်းမှုများ ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် စစ်တပ် ထုတ်ကုန်များအပါအဝင် လုပ်ငန်းပေါင်း ၂၀ ကျော်က လက်တွဲမှုရပ်ဆိုင်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမက ကင်းမရွာသို့အလှူတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ဝေဖန်သံများ ပိုမိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။
ရက်အတော်ကြာ အွန်လိုင်းကနေ ပျောက်နေခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ ဒီနေ့လေးမှာတော့ သူမ က ဘုရားတရားစာတွေ ရှယ်ရင်း ဖေ့ဘုတ်ပေါ်ကို ပြန်လည်ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ…
သူမ ရဲ့ဖေ့ဘုတ် Myday မှာ လူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လည်း မှန်တာကိုလုပ်ပြီး ပွင့်လင်းသူထက် မဟုတ်မမှန်တာလုပ်ပြီး ဟန်ဆောင်ကောင်းသူက ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်. .. ကမ္ဘာပေါ်မှာ မေတ္တာတရားနဲ့ မတန်တဲ့သူဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သူတစ်ပါးက ပို့ပေးလွှတ်တဲ့ မေတ္တာတရားကို မခံယူတတ်တဲ့ သူပဲရှိတာပါ ဆိုတဲ့ တရားစာလေးတွေကို တင်ထားခဲ့တာ ဖြစ် ပါတယ်။
ဖြူဖြူထွေးရဲ့ တစ်လှမ်းချင်း ပြန်လှမ်းလာနေတဲ့ ပရိသတ်တွေကရော သူမကို လက်ခံအုံးမလားဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးလည်း သူမကို ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုလည်း ရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်…